Tanora mpanakanto: mivelatra amin’ny karazana mozika ireo tanora mpanakanto | NewsMada
Tanora mpanakanto: mivelatra amin’ny karazana mozika ireo tanora mpanakanto
Ankoatra ny fankasitrahana ireo mpanakanto mendrika, fotoana iray nahatsapana ny rivotra mitsoka eo amin’ny tontolon’ny mozika eto Madagasikara koa ny “RDJ Mozika”, tontosa ny faran’ny herinandro teo… Jery todika kely.
“Faly aho amin’ny fivoaran’ny mozika sy ny fanomezan-danja azy eto Madagasikara. Ny fangatahako amintsika zandry, tanora miangaly azy ity: aza hadinoina ny mozika gasigasy”. Hafatra avy amin’I Jaojoby io. Nasaina manokana hanome voninahitra ny lanonana “RDJ Mozika” izy ny asabotsy teo, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Izy rahateo no nanokatra ny fiakarana an-tsehatra, izay nitondrany ampahany tamin’ireo sanganasany tsy tontan’ny ela…
Niantefa tamin’ireo tanora mpanakanto maro, izay tonga nanome voninahitra ny lanonana ny hafatry ny mpanjakan’ny salegy. Tsikaritra mantsy mivelatra amin’ny karazana mozika manaraka ny fitsokan’ny rivotra maneran-tany ireo mpanakanto malagasy. Mahafinaritra satria maharaka, ary tsy maka tahaka be fahatany,fa miezaka ny misongadina izy ireo.
Pofon’izay fivelarana izay ny fisian’ireo sokajy vaovao nifaninana, toa ny “Afro beat”, “afro zouk”, “Afro trap”, “electronic Music”, sns.
Mitondra ny an’ny tena
“Mahafaly ahy ny manolotra ity fankasitrahana ity hoan’ny ekipanay rehetra, sy ho antsika mpankafy rehetra ihany koa. Dingana iray lehibe hoan’ny mozika malagasy ity”, hoy kosa ny nambaran’i Shyn, izay nosafidian’ny maro ho “Mpanakanton’ny taona 2018”. Tsy iadian-kevitra fa mendrika ho azy ny fankasitrahana. Porofon’izany ny fahamaroan’ny mpankafy ity mpanakanto ity, manerana ny Nosy, ka hatrany ivelany. Mazava koa anefa ny nampitainy: mitondra avo ny mozika malagasy, izany hoe miainga amin’ny fototra, kanefa maharaka ny filan’ny mpankafy mozika maneran-tany.
“Anisan’ny tena irariako ho maro amintsika mpanakanto ny fisian’ny fiaraha-miasa eo amintsika. Mahafinaritra ahy manokana ny fisian’ity sokajy fiarahamiasan’ny mpanakanto ity”, hoy kosa i Mamy Gotso. Hahavitana vokatra misongadina tokoa izay fiaraha-miasa izay, raha tsy haka ohatra afa-tsy ny “Ilay silako”, niarahan’i Rak Roots sy ny Quator Squad, nahazo ny fankasitrahana.